Mbido > Kachasị Nootropic Supplement nke Alfa GPC na 2021
Na echiche anyị, ihe kasị mma nootropic emeju nke Alpha GPC na 2021 maka ojiji nkeonwe bụ Cofttek Alfa GPC. Ihe kachasị mma gbasara mgbakwunye a bụ na ọ bụ ngwaahịa anaghị eri anụ / anụ anaghị eri anụ wee si otu a, onye ọ bụla nwere ike ịnara ya. Nke ka mkpa bụ na mgbakwunye ahụ enweghị ọka wit, gluten, mmiri ara ehi, akwa, azụ, na mkpụrụ. Ya mere, ya mere, kwesiri kwa maka oriri maka ndi mmadu nwere ihe nfụkasị ahụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’onwere ụdị ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ebu ụzọ gwa dọkịta gị. Nke a mgbakwunye emeela naanị nyocha dị mma ma mee ihe ọ na-ekwu na ọ ga-eme.
Kedu ihe bụ Alpha GPC dị mma?
Alpha GPC nchịkwa na-eme ka ntọhapụ nke neurotransmitter acetylcholine na-eme ka mmuta na ebe nchekwa dịkwuo elu. Na ndị na-eme egwuregwu, mgbakwunye Alpha GPC na-egbochi mbelata mmega ahụ na ọkwa choline, na-eme ka ntachi obi na uto hormone na-eto eto.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka Alpha GPC?
Alpha GPC dị irè na-emewanye ike ọrụ ike mgbe ụbọchị isii nke mgbakwunye. Ndị na-eme egwuregwu egwuregwu nwere ike ịtụle ịgbakwunye Alpha GPC na nri nke ọsọ na ike ndị egwuregwu iji bulie arụmọrụ ahụ ike.
Alfa GPC ọ na-eme ka ike gwụ gị?
Ọ na - eme ka ike gwụ gị n'abalị, mana nke a bụ ihe ezi uche dị na ya n'ihi ọrụ dị elu nke uche gị rụrụ n'ụbọchị. Ma n'ezie, ikwesiri ihi ura iji mee ka uche gi mezie ihe ncheta nke i mere ogologo ubochi dum.
Alphabụrụ Alfa ọ nwere ihe ọghọm?
Mmetụta dị na Alpha Brain dị obere. Dabere na Alpha Brain Clinical ikpe na akaebe, ọ dịghị akụkọ banyere mmetụta ọjọọ nke mgbakwunye.
Nwere ike iburu Alpha GPC na CDP choline ọnụ?
Ihe mgbakwunye choline abụọ a na-arụ ọrụ nke ọma. Alpha GPC bụ ihe na-emepụta phosphatidylcholine (PC). Na mgbakwunye CDP Choline na-enye uridine dị mkpa maka njikọta PC. Ya mere ejikọtara ọnụ, ị na-enye ụbụrụ gị ụdị choline ọ chọrọ ozugbo na ọkwa cellular.
Alfa GPC okike?
Alpha GPC bu ihe molekul na-eme nke di n’ime ụbụrụ. Nri a dị mkpa, nke metụtara ezinụlọ B-vitamin, na-ebikwa n'ime sel mkpụrụ ndụ.
Ọ bụ ụbụrụ Alfa dị mma?
Alfa Brain bụ otu n'ime ndị kasị dịrị nchebe nootropic Mmeju. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwe obere mmetụta dị obere n'ihe metụtara mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ma ọ bụ mgbe ị na-eri karịa ihe achọrọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji rapara na usoro onyonyo a tụrụ aro ma ga-agwa dọkịta gị tupu iwere mgbakwunye mgbakwunye nootropic
Ogologo oge ole ka mmetụta nke ụbụrụ Alpha na-adịru?
Brain Brain na-ewe ihe karịrị awa isii. Dị ka ụfọdụ nyocha onwe ha na Alpha Brain si kwuo, mmetụta ndị ahụ nwere ike ịdị karịa 6-7 awa.
Mkpụrụ ụbụrụ Alpha ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
Ojiji nke ụbụrụ Alpha maka izu 6 mere ka ncheta okwu na ọrụ nchịkwa dịkwuo mma n'oge na-adịbeghị anya ma e jiri ya tụnyere njikwa, na otu ndị okenye siri ike dị afọ 18-35. Nsonaazụ nke nnwale a kwesịrị ịmụtakwu ihe gbasara itinye aka na mmelite Mmeju na egwuregwu.
Joe Rogan o nwere ụbụrụ Alpha?
Joe Rogan nwere mmekọ na ụlọ ọrụ a na-akpọ Onnit, nke na-emepụta Alpha Brain, ngwaahịa pụtara iji melite ncheta okwu na mmecha ọrụ. Alpha Brain bụkwa otu n'ime ngwaahịa ole na ole na ahịa nke nwere ọnwụnwa ahụike na Rogan kwenyere na ọ na-enyere ya aka icheta okwu na nkebi ahịrịokwu karịa placebo.
Alfa ụbụrụ ọ kwadoro?
N'ikwu okwu banyere ọnọdụ a, onye guzobere Onnit Aubrey Marcus kwuru, sị: “Anyị nwere ike ikwu hoo haa na ọ dịghị amphetamines ma ọ bụ ihe ndị ọzọ amachibidoro iwu n'ụbụrụ Alpha. Anyị na-anwale ihe ọ bụla ụbụrụ ụbụrụ Alpha na-akwụ ụgwọ iji hụ na ngwaahịa anyị enweghị ihe ọ bụla amachibidoro ma ọ bụ iwu na-akwadoghị.
Kedu ihe mgbakwunye Nootropic kacha mma?
Alpha GPC bụ ihe na-adịkarị na ntanetị dị na ụbụrụ. A na-ahapụkwa onyinye a mgbe acid fatty dị na soy na osisi ndị ọzọ mebiri. Ọ bụ ezie na Alpha GPC dị adị, na itinye uche ya na oke ya, ezughị iji rụọ ọrụ ezubere ya iji kwado. N'ihi ya, Alpha GPC a na-edekarị ya maka oriri n'ụdị ihe mgbakwunye nri nke nwere Alpha GPC mepụtara site na kemịkal ma ọ bụ enzymatic deacylation nke phosphatidylcholine-enriched soya phospholipids.
Nnyocha e mere na Alpha GPC kemgbe ọtụtụ afọ eguzobewo ya dị ka parasympathomimetic acetylcholine precursor nke na-akpali usoro ụjọ nke parasympathetic na ya mere, na-enyere aka na ọgwụgwọ Alzheimer na ụdị dị iche iche nke mgbaka. Alpha GPC bụkwa ihe kachasị arụ ọrụ nke ọma, yabụ, mgbakwunye ndị nwere onyinye a bụ isi iyi nke nri nri. Choline bụ nri dị mkpa nke ahụ chọrọ iji rụọ ọtụtụ ọrụ dị mkpa, dị ka uto cellular na metabolism. Alpha GPC bụkwa nootropic dị irè nke na-eme ka ụbụrụ nwee ọrụ ọgụgụ isi. A na-enyekarị ya ndị agadi nwere nsogbu ịda mbà. Ihe oriri Alpha GPC nwekwara ike ime ka mmepụta nke hormone nke na-eto eto n'ime ahụ dịkwuo elu, yabụ, ndị na-eme egwuregwu gburugburu ọrụ na-eji mgbakwunye Alpha GPC iji mee ka ikike ike ha niile pụta.
Kedu ihe mgbakwunye ụbụrụ kachasị mma?
Ihe mgbakwunye Alpha GPC wetara ọtụtụ uru dị na ya. Iji malite, a maara Alpha GPC iji melite ahụike na ọrụ ụbụrụ. Ọ na-eme nke a site na ịba ụba ogo dopamine na ahụ. Ọtụtụ ọmụmụ ihe ejikọwokwa onyinye a na ịrụ ọrụ ncheta na ikike mmụta. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe mgbakwunye mkpụrụ akwụkwọ GPC enweela ike iweghachi ebe nchekwa n'agbanyeghị na ikpe dị otú ahụ dị ole na ole. Ewezuga imeziwanye ụbụrụ na ọrụ ọgụgụ isi, enwere ihe akaebe zuru oke iji gosipụta na enwere ike iji Alpha GPC na-agwọ ọrịa Alzheimer, ụdị mgbarụ dị iche iche, na ọgụ mwakpo na-adịghị agafe agafe. Ndị egwuregwu na-ejikwa ogige ahụ eme ihe ka ọ na-eme ka arụmọrụ ha pụta. Na mmechi, alpha GPC nwere ọtụtụ uru elebara anya, ihe bụ isi nke gbakwunyere na ewu ewu ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Alpha GPC ọ na-abawanye HGH?
Alpha GPC bụ ihe na-etinye acetylcholine precursor nke nwere ike ime ka ihe omimi hormone na-eto eto site na ọrụ nke acetylcholine-kpaliri catecholamine.
Choline ọ na-ebute ịda mba?
Anyị achọtaghị mkpakọrịta dị ịrịba ama na nyocha kwekọrọ na njikọ nke njikọ dị n'etiti plasma choline na mgbaàmà ịda mba. N'ime ọmụmụ ihe a buru ibu, a na-ejikọ ụda choline na mgbaàmà nchegbu ma ọ bụghị na mgbaàmà ịda mbà n'obi.
Kedu ihe ụbụrụ Alfa nwere?
Alpha Brain nwere ihe abụọ na-eme ka ọkwa acetylcholine dị elu: GPC choline, nke ahụ na-agbanwe na acetylcholine, na Huperzine A, alkaloid sitere na akpa osisi ndị China, nke a makwaara dị ka Huperzia serrata.
Bụ CDP choline mma?
CDP choline bụ ọgwụ na-adịghị ize ndụ, dị ka ule toxicological gosipụtara; ọ dịghị enwe mmetụta dị oke njọ na sistemụ cholinergic na anabatacha ya nke ọma.
Gịnị bụ mmetụta nke Noopept?
Omume mmetụta ndị noopept nwere gụnyere nsogbu ụra (ndị ọrịa 5/31), mgbakasị (3/31), na ọbara mgbali elu (7/31) (Neznamov na Teleshova, 2009). Usoro nke ime ihe site na nyocha nke mbu Otu ihe omumu banyere ogwu na-egosi na noopept gafere ihe mgbochi ụbụrụ ụbụrụ.
Alpha GPC ọ na-abawanye dopamine?
O nwere ike ịbụ na Alpha GPC ga - eme ka ncheta dị mma ma melite ikike ịmụ ihe. Alpha GPC nwekwara ike ibuli ogo dopamine, nke na-erite uru ụbụrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Kedu otu ngwa ngwa Alpha GPC si arụ ọrụ?
Alpha GPC dị irè na ịbawanye ụba ike ike mgbe ụbọchị isii nke mgbakwunye. Ndị na-eme egwuregwu egwuregwu nwere ike ịtụle ịgbakwunye Alpha GPC na nri nke ọsọ na ike ndị egwuregwu iji bulie arụmọrụ ahụ ike.
Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke choline erughi?
Na-echegbu onwe ma ọ bụ na-enweghị ike.
Ọrịa na-egbu egbu, nke a maara dị ka ọrịa imeju na-egbu egbu na-egbu egbu (NAFLD)
Hemorrhagic akụrụ necrosis.
Choline dị mma maka nchekasị?
Choline nwere ike ịkwalite ọrụ ncheta, melite mmepe ụbụrụ ma lekọta nchekasị na nsogbu uche ndị ọzọ.
Gịnị bụ ihe kasị mma isi iyi nke choline?
Ngwongwo ndi kachasi nri nke choline bu anu, azu, mmiri ara ehi na akwa. Ọtụtụ mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, na ọka niile nwere choline, yabụ enwere ọtụtụ nhọrọ maka ndị na-eri anụ anaghị eri anụ ma ọ bụ ihe ọkụkụ.
Olee otú m ga-esi choline ndammana?
Multivitamins anaghị enwekarị choline.
Ọ bụ ezie na nri ndị jupụtara na choline — umeji, nkochi ime akwa, na anụ na-acha uhie uhie — na-adịkarị ka abụba buru ibu, a pụkwara ịchọta choline na nri ndị dị ala karịa abụba abụba gụnyere salmọn, cod, tilapia, ara ọkụkọ, na legumes.
Kedu ka ị si anwale ụkọ choline?
Ka ọ dị ugbu a, enweghị nnwale nyocha ọ bụla nwere ike iji mata ndị na-adịghị arụ ọrụ. Plasma choline, betaine, na phosphatidylcholine concentrations belatara na ụmụ mmadụ na-eri nri na-ezighi ezi, mana ha dị larịị mgbe ha daa 30% -50%.
Kedu ihe Alpha GPC na-atọ ụtọ?
Ọ nwere uto ụtọ ụtọ ya nke enwere ike ịmatacha ya. O doro anya na ọ bụghị ihe shuga ga-eji dochie mmadụ niile.
Ihe mgbakwunye choline dị irè?
Nnukwu ọmụmụ ihe ọmụmụ jikọtara oriri choline na ọkwa ọbara na ịrụ ọrụ ụbụrụ ka mma, gụnyere ncheta na nhazi ka mma. Ntinye na 1,000 mg kwa ụbọchị dugara na ncheta okwu dị mkpirikpi na ogologo oge nke ndị okenye dị afọ 50-85 nwere ncheta na-adịghị mma.
Citicoline ọ bụ otu ihe ahụ choline?
Citicoline bụ aha mgwa ihe mejupụtara nke kemikal na cytidine-diphosphocholine (CDP choline). Nanị ihe dị iche bụ na CDP choline na-ewere ọnọdụ na ụmụ mmadụ, na citicoline bụ ụdị achọtara na mgbakwunye nri.
Ndi citicoline na-abawanye dopamine?
Citicoline na-eme ka nkwukọrịta cellular na-emewanyewanye site na ịbawanye nnweta nke ndị na-ahụ maka ntanetị, gụnyere acetylcholine, norepinephrine, na dopamine. N'okwu ndị dị mfe, a na-eji choline akụrụngwa nke citicoline iji mepụta acetylcholine, nke bụ isi ihe nchịkwa na ụbụrụ mmadụ.
Kedu ihe dị iche na choline na phosphatidylcholine?
Phosphatidylcholine bụ kemịkal dị n’ime akwa, soybeans, mọstad, sunflower, na nri ndị ọzọ. A na - eji okwu a "phosphatidylcholine" mgbe ụfọdụ iji "lecithin," ọ bụ ezie na ha abụọ dị iche. Choline bụ akụkụ nke phosphatidylcholine, nke bụ ngwongwo nke lecithin.
Choline ọ na-ebute ụjọ?
N'ime ọmụmụ ihe a buru ibu, a na-ejikọ ụda choline na mgbaàmà nchegbu ma ọ bụghị na mgbaàmà ịda mbà n'obi.
Choline na-abawanye serotonin?
Mgbanwe na ọkwa plasma nke choline ma ọ bụ nke ụfọdụ amino acid na-eduga na mgbanwe na ọkwa ụbụrụ nke precursors maka neurotransmitters ndị a-choline maka acetylcholine, tryptophan maka serotonin, na tyrosine maka catecholamines.
Gịnị bụ mmetụta nke choline?
a fishy ahu isi.
Choline ọ na - enye gị ume?
Ọ kọrọ na choline ekere òkè dị mkpa na metabolism nke abụba; ọ na-agbaji abụba maka iji mee ihe dị ka isi iyi ike. Omume a nke choline na-eme ka ọ baa uru na igbochi ọnọdụ dịka oke imeju ma ọ bụ oke abụba n'ime ọbara.
Lecithin ọ dị mma maka nchekasị?
A na-eji Lecithin eme ihe maka ịgwọ ọrịa ebe nchekwa dịka dementia na ọrịa Alzheimer. A na-ejikwa ya maka ịgwọ ọrịa gallbladder, ọrịa imeju, ụdị ịda mba ụfọdụ, cholesterol dị elu, nchekasị, na ọrịa akpụkpọ a na-akpọ eczema.
Gịnị bụ mmetụta dị n'akụkụ Alfa GPC?
O nwere ike ibute nsonaazụ ụfọdụ ụfọdụ gụnyere nrekasi obi, isi ọwụwa, anya ntughari, na anụ ahụ ọkụ. Mgbe enyere dị ka ogbugba: Alpha GPC nwere ike ịnwe nsogbu mgbe eji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. O nwere ike ibute nsonaazụ ụfọdụ ụfọdụ gụnyere obi mgbawa, isi ọwụwa, ehighị ụra nke ọma, mgbagwoju anya, na ịcha ọbara ọbara na saịtị ọgwụ.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe Alpha GPC iji rụọ ọrụ?
A na-agba mmiri Alpha GPC ma ọ bụ abụba abụba?
Formsdị kachasị dị na nri bụ phosphatidylcholine (PC), phosphocholine, alpha-gpc, sphingomyelin, CDP-choline, na choline n'efu. Phospholine, choline na-akwụghị ụgwọ, na alpha-gpc bụ mmiri nwere ike ịgbanye mmiri, ebe phosphatidylcholine na sphingomyelin bụ abụba-agbaze soluble.
Ọ bụ ụbụrụ Alpha dị mma iji?
Alpha Brain bụ otu n'ime mgbakwunye mgbakwunye nootropic kasị dịrị nchebe. Agbanyeghị, ịnwere ike ịnwe obere mmetụta ụfọdụ n'ihe metụtara mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ ma ọ bụ mgbe ị na-eri karịa ihe achọrọ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji rapara na usoro onyonyo a tụrụ aro ma ga-agwa dọkịta gị tupu iwere mgbakwunye mgbakwunye nootropic.
Ngwunye ụbụrụ ọ na-arụ ọrụ?
Ọmụmụ ihe ọmụmụ niile emere iji nyochaa mmetụta dị iche iche nke Alfa GPC na ọrụ dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ kwenyere na onyinye ahụ, mgbe ejiri ya rụọ ọrụ kwa ụbọchị, bụ nchekwa kpamkpam. Agbanyeghị, ị excessiveụfe Alfa GPC nwere ike bute nsonaazụ, dịka isi ọwụwa, obi mgbu, ehighị ụra nke ọma. Nke ka nkpa, umu nwanyi di ime na inye ndi ara inye ara ha aghaghi eripia ihe a n’iile dika emebeghị nnyocha omumu ihe omumu banyere Alfa GPC na ndi nwanyi ime. N’otu aka ahu, oburu n’inwe oria di nma, o kachasi nma ka gi na dibia gi ghari tupu i bido ihe ndi ozo Alfa GPC.
Nwere ike Nootropics kpatara isi ọwụwa?
Mana enwere mmetụta ụfọdụ, gụnyere isi ọwụwa, nchekasị na ehighị ụra.
Choline nke ukwuu nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ?
You nwere ike were Alpha GPC kwa ụbọchị?
Mgbe ewere ya na usoro eji atụ aro Alfa GPC. Nye ọtụtụ ndị toro eto, usoro a na-anabata usoro ọgwụgwọ dị oke obosara; usoro onu ogugu nke 300-1200 mg, mgbe ewere ya na otu ma obu abuo, odi nma ma di nma.
Ndi Nootropics dị mma?
Iji nootropics eme ihe na-adịghị mma — ihe ọ bụla nwere ike ịgbanwe, meziwanye, ma ọ bụ mee ka ọ pụta ìhè, ọkachasị site na mkpali ma ọ bụ mgbochi nke ụfọdụ ndị na - ahụ maka ntụgharị - nwere ike bụrụ ihe dị egwu ma nwekwaa nsogbu ụbụrụ mmadụ, yana ụfọdụ ndị nwere akụkọ ihe mere eme nke ọgụgụ isi ma ọ bụ ihe nsogbu nwere ike.
Kedu ọgwụ ụbụrụ kacha mma n'ahịa?
N’afọ ole na ole gara aga, ndị mmadụ bidoro ilebara ahụ ha anya. Mkparịta ụka ahụ gbasara ahụike ụbụrụ agbasiela ike ka ụbụrụ na-arụ ọrụ dị ka ebe njikwa ahụ dum na ọrụ ọ bụla na ụbụrụ nwere ike iduga npụta dị egwu. Choline na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwado ahụike ụbụrụ na imeziwanye ụbụrụ. Ya mere, ọtụtụ ihe mgbakwunye nri ugbu a gụnyere ogige ndị na-enye ahụ ike. Otu ihe dị otú ahụ bụ Alpha GPC.
Kọfị Bụ Nootropic?
A na-ewere kọfị dị ka nootropic n'ihi na ọ nwere caffeine. Caffeine bụ nootropic a ma ama nke na-eme ka nchekwube na ọnọdụ dịkwuo elu. Nootropics, nke a na-akpọkarị "smart smart" na-enyere aka melite ọrụ ọgụgụ isi, na-eme ka ncheta na ụbụrụ na-arụ ọrụ.
Kedu Nootropics na-arụ ọrụ n'ezie?
Ihe omumu emere iji ghota ihe alfa GPC na ike mmepụta gosipụtara na usoro nke 600 mg na-akpata mmụba nke secretion nke uto hormone. Yabụ, usoro onunu ogwu nke alpha GPC na-adịkarị n'etiti 300 ruo 600 mg na ndị na-eme egwuregwu ka ha dụọ ọdụ ka ha nọrọ n'akụkụ elu.
Otú ọ dị, mgbe a bịara n'ịgwọ ịmịpụta ihe ọmụma, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọmụmụ nile nke nyochaa mmetụta nke Alpha GPC na arụ ọrụ uche na-eji usoro ọgwụgwọ 1200 mg eme ihe kwa ụbọchị, kewara ụzọ atọ nke 400 mg. Mbelata na usoro onunu ogwu a enweghi ike inwe otu ihe dika ihe ogwu 1200 mg kwa ubochi. Ya mere, ndị ọrịa na-arịa Alzheimer, dementia, na TIA na-adụkarị ọdụ ka ha rapara na usoro 1200mg / day.
CBD ọ bụ Nootropic?
N'ihi ọtụtụ ọdịmma ahụike ya dị iche iche, a na-ahụta CBD dị ka nootropic. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta nwere ịnụ ọkụ n'obi banyere ikike CBD nwere iji nyere aka na nsogbu ịma aka dị ka nchekasị, ịda mba na ndagide.
Kedu uru nke Alpha GPC?
① Ọ dị irè na ịgwọ ọrịa Alzheimer
Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ iji mụọ ike nke onyinye a iji nyere aka n'ịgwọ Alzheimer. Otu nnyocha dị otú ahụ gosipụtara na Alpha GPC na-eme ka ogo nke acetylcholine dị na ụbụrụ. Acetylcholine jikọtara ya na ụbụrụ arụ ọrụ yana cognition dị elu. Nke ka mkpa bụ na ọmụmụ ihe ahụ kpughere na ndị nwere ọbara mgbali elu, Alpha GPC belatara mbufụt gburugburu akwara ọbara na ụbụrụ, si otú ahụ na-eduga na ọrụ ụbụrụ ka mma.
Nnyocha egosila na ndị ọrịa na-arịa ọrịa Alzheimer nwere ike irite uru na-ewere 1200 mg nke alpha GPC kwa ụbọchị. Nke a na onunu ogwu na-atụ aro maka a oge nke 3 ka 6 ọnwa na budata mma echiche echiche nke ndị na-ata ahụhụ site na nke a na-egbu egbu ọrịa.
② Ọ na - enyere Ọka Ọrịa
Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mgbagwoju anya n'etiti mgbaka na ọrịa Alzheimers. Yabụ, ọ dị mkpa igosipụta ọdịiche dị n'etiti abụọ na mbụ. Dementia bụ okwu n’ozuzu iji kọwaa mbelata nke ọgụgụ isi nke mmadụ rue na ọdịda ahụ na-amalite igbochi ọrụ mmadụ na-arụ kwa ụbọchị. Alzheimer abụghị mgbaka kama ọ bụ ọrịa a kapịrị ọnụ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị akpata isi mgbaka.
N'ime afọ ndị gafeworonụ, emeela ọtụtụ ọmụmụ iji mụọ nsonaazụ nke alfa GPC na ndị ọrịa dementia. Otu ihe omumu gosiputara na alfa GPC mgbe nile iweta onodi oru na oru n’ebe ndi oria n’adighi ike rue onwa. N'otu aka ahụ, ọmụmụ ọzọ jikọtara oriri alfa GPC mgbe niile na cognition dị mma na ndị ọrịa na-arịa ọrịa dementia na ọrịa ụbụrụ. Na mmechi, ndị mmadụ na-arịa ọrịa dementia nwere ike irite uru dị ukwuu site na ị takingụ 1000 mg nke Alpha GPC kwa ụbọchị. N'ime ndị ọrịa dị otú a, a na-ejikọ nri Alpha GPC na akparamaagwa dị mma, ọnọdụ, na cognition.
③ Ejiri ya mee ihe maka ịgwọ Ọrịa Ischemic Transient
Ọrịa ischemic dị mkpụmkpụ (TIA) bụ obere oge nke dysfunction akwara, na-ebutekarị site na nkwụsị nye ụbụrụ na anya. Ọrịa ọgbụgba na-adịte aka na-adịkarị ntakịrị oge mana mana a na-ahụ ya dị ka ndị na - ebido ọrịa strok. Emere nnyocha iji nyochaa mmetụta Alfa GPC na-arịa ọrịa strok na ndị ọrịa TIA. Ọmụmụ ihe ahụ kpughere na ndị butere ọgwụ ọgwụ 1200-mg Alpha GPC kwa ụbọchị ruo ụbọchị 28, na-esochi 1200 mg / ụbọchị nke Alpha GPC (site na usoro ọnụ) ruo ọnwa isii, gosipụtara nkà iche echiche ka mma yana mgbake ka mma site na TIA .
④ Ọ na - eme Mgbakwunye Nootropic dị Irè
Acetylcholine bụ kemịkalụ na-arụ ọrụ nke na - arụ ọrụ dịka neurotransmitter ma bụrụkwa ihe dị mkpa maka ncheta na ọrụ mmụta. Alfa GPC na-abawanye kemikal a n’ime ụbụrụ, si otú a na-eduga n’icheta ncheta na cognition ka nma. Ya mere, a na-ejikarị alfa GPC eme ihe dika isi ihe ndi ozo na nri nri nri nootropic.
⑤ Ọ na-emeziwanye ike egwuregwu
N'ime ndị na-eme egwuregwu, a na-ejikọ alfa GPC na mbelata mmemme mmega ahụ na choline. Nke ka mkpa, a na - ejikọ ya na mmụba homonụ na-abawanye na arụmọrụ ntinye aka na nkwalite. Ya mere, ndị na-enye ọzụzụ na ndị na-enye ọzụzụ na-adụ ndị na-eme egwuregwu ume ka ha rie alpha GPC iji mepụta arụmọrụ ike.
(2). Doggrell SA & Evans S; Evans (Ọkt 2003). "Ọgwụgwọ nke mgbaka na ntụgharị ụda olu". Echiche Ndị Ọkachamara Na-enyocha Ọgwụ. 12 (10): 1633–1654.
(3). Parnetti, Lucilla; et al. (2007). "Cholinergic precursor na ọgwụgwọ nke mmerụ ahụ na-adịghị mma: Ọbịbịa na-adịghị mma ma ọ bụ mkpa maka nyochaghachi?". Akwụkwọ nke Neurological Sciences. 257 (1–2): 264–9.
(4). Njem inyocha egt.
(5). Oleoylethanolamide (oea) - anwansi anwansi nke ndu gi.
(6). Anandamide vs cbd: kedu nke ka mma maka ahụike gị? Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ha!
(7). Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(8). Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(9). Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(10). Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(11). Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(12). Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13). Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).
Alfa-gpc maa otu nke kacha mma nootropics m. M na-eji 150mg na ụbọchị m chọrọ nkwalite ụbụrụ.
Ihe kacha ju m anya bụ na ọ bụ ikike ịkwalite arụmọrụ na mgbake nke ọma. Dị ka ọkpọ basketball, ọ bụ PED n'ụzọ doro anya. Na-enwekwu ike ịchịkwa ahụ gị na otu ọ si emegharị, mmegharị akwara ọma na nhazi na-abawanye ụba.
Ana m ewere 300mg ugbu a. Were ya maka ọnwa 2 ozugbo. Enweghị ịda mba. Naanị ike maka mgbatị ahụ.
Ana m ewere 300mg n'ụtụtụ kwa ụbọchị. Enwere m nkụda mmụọ mgbe izu ole na ole n'ime afọ ole na ole mbụ, yabụ m ga-ezumike ezumike ụbọchị ole na ole. Ugbu a, mgbe m zuru ike wee laghachikwuru ya, ọ na-akawanye m mma ma m nwere ezigbo nrọ kwesịrị ekwesị maka otu abalị ma ọ bụ abụọ. Ọ bụghị ezigbo ụra. Ọ bụghị ihe kachasị amasị m. O meela ka nsogbu nke ndụ m zuru oke nke m. Ugbu a, m na-elekwasị anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, enwekwara m ume. Amaara m onye ọ bụla ọzọ na-ekwu na ha dara mbà n'obi na ya - ma ana m ekweta na ịda mbà n'obi nke ukwuu bụ ihe kachasị njọ n'ụwa ma ga-emebi ụbọchị gị. Yabụ ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụ nke a ma na-eche echiche ịnwale ya, bido na mkpụrụedemede kachasị dị ala, ikekwe ọbụlagodi ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ karịa, ma lelee mmetụta ị na-enwe anya.
Maka m ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Anaghị m atụ anya nke ukwuu mana oge ọ bụla m were ya, ọ na-adị m ka m lekwasịrị anya ma nwekwuo ncheta.
M na-amụ ọtụtụ ihe n'ihi ya, ọ pụtawo m nke ọma. Ana m ewere 150-300 mg.